IYurophu njengelizwekazi yahluke kakhulu, EYurophu inika into yonke uhlobo umhambi - izinja okumnandi ifakiwe. Kodwa uya ungcamla incasa ukuba okunoneleleyo apho uninzi? Yeyiphi ipiks yokutya eya kuba nayo Instagram wakho unwele up 100 ye-azithandayo? Misa uyazibuza kwaye uqale zidla. Amava eYurophu Best Ukutya Iindawo nangezisizilo yethu top!
Ukuba ukhangela into okunencasa, akuyi kuba elifutshane ongakhetha sisi. Bona ngokoqobo kwi emagumbini onke. Oyintandokazi yethu? A isiraphu waffle kuhlanganisa waffles ezimbini ezingcakacileyo, nzulu-othosiweyo ngokulunga kwe-gooey ngaphakathi kwaye ukhutshiwe ngoshukela olungumgubo.
Njani nokuba sicinga yokuthiya eYurophu Best Ukutya Places kwaye ziquka Italy! Ingaba kukho ilizwe aseYurophu ukutya lenkundla kakhulu? Mholweni, carbs! I-pizza kunye ne-pasta zikuludwe lomntu wonke! Khawukhumbule nje ukuba yonke indawo inezinto ezizodwa kwaye ixhomekeke kwixesha.
ndawo ukutya London iselelona yinxalenye Best Ukutya Iindawo eYurophu de siyazi kwisiphumo Brexit. London isigcawu i mish-ngumash kombono zemveli okupheka ezintsha mihla. Akukho luhambo lokuya eLondon olugqibeleleyo ngaphandle kweti enye yasemva kwemini, a yosiwe iiCawa pub ebumelwaneni kunye lathi mayiyo kundithengela bitters okanye ezinye takeaway intlanzi neetshiphs ukusuka kwenye abaninzi 'chippies esi sixeko.’ Ukuba Amakhitshi Michelin-eziphawuliweyo ngakumbi into yakho, ngoko kuloo ndawo ekunene. Kukho ngoku zokutyela ezintlanu kwi-UK apho ubambe iinkwenkwezi ezintathu Michelin. I lamanzi Inn, Alain Ducasse e Dorchester, i Araki, Restaurant Gordon Ramsay, kunye namanqatha Duck.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexperience-europes-best-food-spots%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)